ပွငျးထနျနဆေဲ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့တိုကျပှဲ – the One Sports Journal
May 22, 2021 author one articles 0
၂၀၂၀-၂၁ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကတော့ ဇာတျသိမျးခနျးရောကျဖို့ ပှဲစဉျတဈပှဲသာလိုပါတော့တယျ။ အခုအခြိနျမှာ ခနျြပီယံဖွဈမယျ့အသငျး၊ တနျးဆငျးသှားရတဲ့အသငျးတှထှေကျပျေါလာပွီဖွဈပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့တိုကျပှဲကတော့ ထုံးစံအတိုငျး ပွငျးထနျနဆေဲပါပဲ။ လောလောဆယျအနအေထားအရ ခယျြလျဆီးက (၆၇)မှတျနဲ့အဆငျ့(၃)၊ လီဗာပူးလျက (၆၆)မှတျနဲ့အဆငျ့(၄)၊ လကျစတာကတော့ လီဗာပူးလျနဲ့အမှတျတူ ဂိုးကှာခွားခကျြကွောငျ့ အဆငျ့(၅)နရောမှာ ရပျတညျနတေယျ။
လကျစတာဟာ မနှဈကလညျး ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရဖို့ လကျတဈကမျးအလိုကိုရောကျခဲ့ပွီးမှ ရာသီပိတျပှဲမှာ ယူနိုကျတကျကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ ယူရိုပါလိဂျဝငျခှငျ့နဲ့သာကနြေပျခဲ့ရပွီး အခုလညျး အဲဒီကွမ်မာဆိုး တဈပတျပွနျလညျမယျ့အခွအေနနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပွနျပွီ။ မနှဈတုနျးကလညျး ရလဒျတှကေောငျးခဲ့ပွီးမှ ရာသီကုနျဖို့နီးစပျလာခြိနျမှာ ရလဒျတှဆေိုးရှားခဲ့တာကွောငျ့ အဆငျ့(၅)သာရခဲ့သလို ဒီရာသီမှာလညျး အဆငျ့(၃)နရောမှာ အခြိနျတျောတျောကွာအောငျ ရပျတညျခဲ့ပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျးပှဲတှမှော အမှားအယှငျးတှရှေိလာတဲ့အတှကျ အဆငျ့(၅)အထိထိုးကသြှားတာဖွဈတယျ။
လကျစတာအသငျး မတညျမငွိမျဖွဈခဲ့တာကို အခှငျ့ကောငျးယူခဲ့တာက ခယျြလျဆီးနဲ့ လီဗာပူးလျပဲဖွဈပွီး အထူးသဖွငျ့ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အဆငျ့(၄)အတှငျးဝငျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြနညျးပါးနတေဲ့ဘဝကနေ ရလဒျကောငျးတှဆေကျတိုကျယူနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ အခုလိုအဆငျ့အထိရောကျခဲ့တာပဲ။ အခုအခြိနျမှာ ခယျြလျဆီးရော၊ လီဗာပူးလျပါ ကိုယျ့ကံကွမ်မာကို ကိုယျတိုငျဖနျတီးနိုငျခှငျ့ရှိနပေမေယျ့ လကျစတာအသငျးကတော့ အဲဒီအခှငျ့အရေးမရှိတော့ဘူး။
ဂိုးကှာခွားခကျြအရ ခယျြလျဆီးက (+၂၃)၊ လီဗာပူးလျက (+၂၄)၊ လကျစတာက (+၂၀)သာရှိလို့ လကျစတာအသငျးအတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြနညျးပါးနပွေီ။ ရာသီပိတျပှဲတှကေို ကွညျ့ရငျ ခယျြလျဆီးက ဗီလာနဲ့အဝေးကှငျး၊ လီဗာပူးလျက ပဲလစျေ့နဲ့ အိမျကှငျးကစားရမှာဖွဈပမေယျ့ လကျစတာအသငျးက ယူရိုပါလိဂျဝငျခှငျ့တဈနရောမြှျောလငျ့ခကျြရှိနတေဲ့ စပါးအသငျးကို အိမျကှငျးပှဲကစားရမှာဖွဈလို့ ကနျြတဲ့နှဈသငျးထကျ ပှဲပိုကွပျနတေယျလို့ပွောရမယျ။ တကယျလို့ ခယျြလျဆီးနဲ့လီဗာပူးလျ ရာသီပိတျပှဲမှာ အမှားလုပျခဲ့ရငျတောငျ လကျစတာက စပါးအသငျးကို အနိုငျရဖို့ အသညျးအသနျကစားရဦးမှာပဲ။
နောကျတဈခကျြကလညျး ဒီသုံးသငျးစလုံး နိုငျပှဲတှရေခဲ့ရငျတောငျ လကျစတာအသငျးဟာ ဂိုးကှာခွားခကျြအရအနညျးဆုံးဖွဈနတေဲ့အတှကျ အခွအေနကေ သိပျတော့မကောငျးလှဘူး။ စပါးအသငျးကို အနိမျ့ဆုံး(၃)ဂိုးပွတျနဲ့အထကျ သှငျးပွီးအနိုငျရမှ လကျစတာတို့ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရမယျ့အနအေထားက ဖွဈလာဖို့ခဲယဉျးတယျ။
လကျစတာအတှကျ နောကျဆုံးမြှျောလငျ့ခကျြက ခယျြလျဆီးနဲ့ လီဗာပူးလျတဈသငျးသငျးခွခြေျောပွီး ကိုယျကလညျး အိမျကှငျးမှာ စပါးကို အနိုငျယူနိုငျဖို့ပဲရှိတော့တယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၃၈)ကို အခုတဈပတျတနင်ျဂနှေ၊ မွနျမာစံတျောခြိနျည(၉း၃၀)အခြိနျမှာ တဈပွိုငျနကျကစားသှားမှာဖွဈပွီး ခယျြလျဆီး၊ လီဗာပူးလျ၊ လကျစတာတို့ရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ (၃)ပှငျ့ဆိုငျဇာတျလမျးက ဘယျလိုအဖွမြေိုးထှကျလာမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ . . .
၂၀၂၀-၂၁ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကတော့ ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်ဖို့ ပွဲစဉ်တစ်ပွဲသာလိုပါတော့တယ်။ အခုအချိန်မှာ ချန်ပီယံဖြစ်မယ့်အသင်း၊ တန်းဆင်းသွားရတဲ့အသင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တိုက်ပွဲကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပြင်းထန်နေဆဲပါပဲ။ လောလောဆယ်အနေအထားအရ ချယ်လ်ဆီးက (၆၇)မှတ်နဲ့အဆင့်(၃)၊ လီဗာပူးလ်က (၆၆)မှတ်နဲ့အဆင့်(၄)၊ လက်စတာကတော့ လီဗာပူးလ်နဲ့အမှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက်ကြောင့် အဆင့်(၅)နေရာမှာ ရပ်တည်နေတယ်။
လက်စတာဟာ မနှစ်ကလည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ လက်တစ်ကမ်းအလိုကိုရောက်ခဲ့ပြီးမှ ရာသီပိတ်ပွဲမှာ ယူနိုက်တက်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်နဲ့သာကျေနပ်ခဲ့ရပြီး အခုလည်း အဲဒီကြမ္မာဆိုး တစ်ပတ်ပြန်လည်မယ့်အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြန်ပြီ။ မနှစ်တုန်းကလည်း ရလဒ်တွေကောင်းခဲ့ပြီးမှ ရာသီကုန်ဖို့နီးစပ်လာချိန်မှာ ရလဒ်တွေဆိုးရွားခဲ့တာကြောင့် အဆင့်(၅)သာရခဲ့သလို ဒီရာသီမှာလည်း အဆင့်(၃)နေရာမှာ အချိန်တော်တော်ကြာအောင် ရပ်တည်ခဲ့ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ အမှားအယွင်းတွေရှိလာတဲ့အတွက် အဆင့်(၅)အထိထိုးကျသွားတာဖြစ်တယ်။
လက်စတာအသင်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာကို အခွင့်ကောင်းယူခဲ့တာက ချယ်လ်ဆီးနဲ့ လီဗာပူးလ်ပဲဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အဆင့်(၄)အတွင်းဝင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်နည်းပါးနေတဲ့ဘဝကနေ ရလဒ်ကောင်းတွေဆက်တိုက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အခုလိုအဆင့်အထိရောက်ခဲ့တာပဲ။ အခုအချိန်မှာ ချယ်လ်ဆီးရော၊ လီဗာပူးလ်ပါ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရှိနေပေမယ့် လက်စတာအသင်းကတော့ အဲဒီအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူး။
ဂိုးကွာခြားချက်အရ ချယ်လ်ဆီးက (+၂၃)၊ လီဗာပူးလ်က (+၂၄)၊ လက်စတာက (+၂၀)သာရှိလို့ လက်စတာအသင်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်နည်းပါးနေပြီ။ ရာသီပိတ်ပွဲတွေကို ကြည့်ရင် ချယ်လ်ဆီးက ဗီလာနဲ့အဝေးကွင်း၊ လီဗာပူးလ်က ပဲလေ့စ်နဲ့ အိမ်ကွင်းကစားရမှာဖြစ်ပေမယ့် လက်စတာအသင်းက ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်တစ်နေရာမျှော်လင့်ချက်ရှိနေတဲ့ စပါးအသင်းကို အိမ်ကွင်းပွဲကစားရမှာဖြစ်လို့ ကျန်တဲ့နှစ်သင်းထက် ပွဲပိုကြပ်နေတယ်လို့ပြောရမယ်။ တကယ်လို့ ချယ်လ်ဆီးနဲ့လီဗာပူးလ် ရာသီပိတ်ပွဲမှာ အမှားလုပ်ခဲ့ရင်တောင် လက်စတာက စပါးအသင်းကို အနိုင်ရဖို့ အသည်းအသန်ကစားရဦးမှာပဲ။
နောက်တစ်ချက်ကလည်း ဒီသုံးသင်းစလုံး နိုင်ပွဲတွေရခဲ့ရင်တောင် လက်စတာအသင်းဟာ ဂိုးကွာခြားချက်အရအနည်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက် အခြေအနေက သိပ်တော့မကောင်းလှဘူး။ စပါးအသင်းကို အနိမ့်ဆုံး(၃)ဂိုးပြတ်နဲ့အထက် သွင်းပြီးအနိုင်ရမှ လက်စတာတို့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရမယ့်အနေအထားက ဖြစ်လာဖို့ခဲယဉ်းတယ်။
လက်စတာအတွက် နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်က ချယ်လ်ဆီးနဲ့ လီဗာပူးလ်တစ်သင်းသင်းခြေချော်ပြီး ကိုယ်ကလည်း အိမ်ကွင်းမှာ စပါးကို အနိုင်ယူနိုင်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၃၈)ကို အခုတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေ၊ မြန်မာစံတော်ချိန်ည(၉း၃၀)အချိန်မှာ တစ်ပြိုင်နက်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီး ချယ်လ်ဆီး၊ လီဗာပူးလ်၊ လက်စတာတို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် (၃)ပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုအဖြေမျိုးထွက်လာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ . . .
ဆယျစုနှဈတဈခုနီးပါးအတှငျး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲကစားခှငျ့ဆုံးရှုံးရတော့မှာလား?